- Mveliso-Chuanghe Fastener Co., Ltd
Isixhobo sethu kunye nolwazi lwenkqubo, kunye nobuchule bethu bokwenza imveliso, zixabisiwe kwiinkqubo ezahlukeneyo zentengiso yemizi mveliso. Nokuba zithengiwe ngumbhambisi okanye yathunyelwa ngqo kwi-OEM, izixhobo zethu ezibunjineli zomatshini kunye nezinto ezenziwe ngamakhaza ziyasetyenziswa kwiindidi ezahlukeneyo zamashishini
Ukusuka kwizithuthi zomsebenzi wezithuthi ukuya kwiilori ezirhuqwayo, abavelisi basebenzisa iimveliso zeCHE kwiintlobo ezahlukeneyo zezicelo zezithuthi. Kwiilori ezirhuqwayo zesitaladi senza izinto ezibandayo ezibandayo eziyinxalenye yeefilitha zeenjini ezinkulu zedizili, ezenziweyo zaze zangqinwa isitulo sebhanti ze-anchors kunye nentambo zenza ii-fasteners kwizicelo zangaphakathi.
I-CHE ibonelela ngeenqwelomoya kunye nezinto ezisetyenziswa kwizithuthuthu. Sisebenzisa indlela yethu ebandayo yokwenza imatshini, ubuchwephesha kunye nobungcali bendibano ukuxhasa abathengi bethu bamandla ombane ngezicelo zabo ezifunwayo.